Ogaden News Agency (ONA) – Xerada Ifo oo si fiican looga xusay Maalinta Xasuuqa Ogadenya
Xerada Ifo oo si fiican looga xusay Maalinta Xasuuqa Ogadenya
Maalin nimadii Isniita ay taariikhdu kubeegnayd 24/2/14 waxaa xerada qoxootiga Ifo ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay xaflad balaadhan oo lagu xusayay Maalinta Xasuuqa Ogadenia. Xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ururka dhalinyarada OYSU fariciisa ka howlgala xerada Ifo. Xaflada oo lagu xusayay maalinta loo madlay xasuuqa Ogadenia oo ah bisha Feberayo sanad kastana laga xuso dacalada dunida ayay shalay laga xusay xerada Ifo ee deegaanka Dhadhaab.
Kulankan oo ay kasoo qayn galeen qaybaha kala duwan ee bulshada S.Ogadenia ee ku nool xerada ayaa bilaabatay abaare 2:00 duhurnimo xiliga Dhadhaab waxaana sidii caadada ahayd lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay fadiilatul sheekh Maxamad oo madasha wacdi dheer ka jeediyay uu kaga hadlay arimo aad u farabadan.
Intaas kadib waxaa khudbad dheer goobta kasoo jeediyay xoghayaha OYSU Ifo mudane Tamaan oo warbixin guud kabixiyay sababta keentay in laxuso bishan iyo ahmiyada ay uleedahay xusuusta shacabka S.Ogadenia sidoo kale wuxuu kawarbixiyay xasuuqyada joogtada ah ee maalinkasta kasocda wadanka Ogadenia.
Dhanka kale maamulka ururka ayaa goobta ka akhriyay waraaq ay munaasabadan ugu talagaleen oo kahadlaysay xasuuqii ay ciidamada gumaysigu gaysteen bishii Febrayo ee sanadkii 1994 iyo xasuuqyo kale oo hadaba kasocda dhulka Ogadenia, taasoo bulshadii qiiro badan kuriday. Sidoo kale qormadan ayaa xanbaarsanayd adkaysigii iyo diidmadii ay mujiyeen shacabka gumaysi diidka ah ee S.Ogadenia oo gumaysiga kubeeniyay damiciisii ahaa in uu qabjabiyo shacabka gobanimaoonka ah. Qormadan oo xanbaar sanayd murugo iyo farxadba ayay dadwaynuhu aad ugu dhagtaagayeen xiligii la akhriyay.
Dhanka kale waxaa goobta kahadlay qaybaha kala duwan ee bulshada sida maamulka faraca, ururka culimo owdiinka, odayaasha iyo hooyooyinka oo dhamaantood ka dhawaajiyay xasuuqa lagu hayo shacabka aan waxba galabsanin ee S.Ogadenia iyo sida loogu baahanyahay in gumaysiga layska dulqaado.